Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe Enethezekile Ehlathini - I-Airbnb
Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe Enethezekile Ehlathini
337 okushiwo abanye
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Janice
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe ingamafidi-skwele angu-400 ngosayizi itholakala amamitha angu-35 ukusuka kumhlali womnikazi. Indlu eyakhiwe ngamapulangwe isendaweni eseduze nomgwaqo ofile, endaweni enokuthula ebangeni lokuhanjwa ngezinyawo ukusuka e-Water Lake (izikebhe nezikebhe ziyasebenziseka). Indawo yokubukela amafilimu, isitolo sokudla nezindawo zokudlela zingaphansi kwemizuzu engu-10 ukusuka endlini eyakhiwe ngamapulangwe. I-Blue Ridge High School ingamakhilomitha angu-2 ukusuka endlini eyakhiwe ngamapulangwe.
Nginakekela ngokwengeziwe ukubulala amagciwane ezindaweni ezivame ukuthintwa phakathi nokubhukha ngaphezu kwenqubo yami evamile yokubulala amagciwane.
Indawo eyakhiwe ngamapulangwe eyabantu abadala kuphela. Umbhede omkhulu. Izinto zikagesi zasekhishini zihlanganisa i-microwave, i-toaster oven, isiqandisi nomshini wekhofi. Izitsha nezitsha zokudla nazo zifakiwe. Indawo yokusebenzela isendlini eyakhiwe ngamapulangwe kanye nomabonakude we-cable nokufinyelela ku-inthanethi. Umshini wokuwasha nokomisa utholakala esakhiweni esihlukile sokusetshenziswa isivakashi.
4.93 · 337 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-337
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe ingamaminithi angu-5 ukusuka e-Mountain Meadows Entertainment Center futhi ingakapheli imizuzu engu-10 ukuya e-Woodland Lake Park. Indlu eyakhiwe ngamapulangwe isendaweni ecishe ibe yimizuzu engu-50 ukusuka e-Sunrise Ski Resort.